မြန်မာ့လက်ဖက်ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် ပလောင်လက်ဖက်စိုက်ပျိုးသူများအသင်းမှ စ?? - Yangon Media Group
မြန်မာ့လက်ဖက်ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် ပလောင်လက်ဖက်စိုက်ပျိုးသူများအသင်းမှ စ??
တောင်ကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇- ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ဖက်ကို တရုတ် နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ပလောင် လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချ သူများအသင်းမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် စနစ်တစ် ခုသတ်မှတ်ပြီး ပင်ကြီးလက်ဖက်မျိုးများကို အဓိကတင်ပို့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့က တရုတ်ပြည်ကိုပို့ဖို့ စနစ်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးပို့မယ်။ ပင်ကြီးလက်ဖက်မျိုးကို တင်ပို့သွားမယ်။ ကိုင်းဖြတ်ပြီး တင်ထားတဲ့လက်ဖက်မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ လက်ဖက်မျိုးတွေ ရွေးချယ်ပြီး တရုတ်ပြည်ကို တင်ပို့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်”ဟု ပလောင်လက် ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများ အသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ညွန့်က ပြောသည်။
မြန်မာ့လက်ဖက်ကို တရုတ်နိုင်ငံသာ မက ပြင်သစ်နိုင်ငံအထိ တင်ပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ဖက်တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၁၅ဝဝဝ မှ ကျပ် ၂ဝဝဝဝ အထိ ဈေးနှုန်းရရှိလာစေရန် စီစဉ်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် လက် ဖက်စိုက်ဧကစုစုပေါင်း ၂၂ဝဝဝဝ ကျော်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။